विहे भएकाे २ दिनमै सम्बन्ध विच्छेद गरे श्रीमानले किन? कस्ती थिइन श्रीमति? हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाज > विहे भएकाे २ दिनमै सम्बन्ध विच्छेद गरे श्रीमानले किन? कस्ती थिइन श्रीमति? हेर्नुहाेस्
admin September 15, 2018 समाज 0
हेडलाइन पढ्दा अचम्म र अपत्यारिलो लाग्यो होला तर यो वास्तविक हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका एक व्यक्तिले विवाह गरेको दुई दिनमा नै श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । पहिलो पटक श्रीमतीलाई मेकअप बिना देखेपछि उनले श्रीमतीसँग छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरेका हुन् । यो अचम्मको घटना मनोचिकित्सक डा. अब्दुल अजिज असफले बताएका हुन् । उनको दाबी अनुसार २८ वषीया एक महिला अकस्मात तनावमा परेकिछिन ।
उक्त महिलाले आफ्नो अप्रत्याशित सम्बन्धविच्छेद पछि मनोवैज्ञानिक दुःख भुल्नका लागि उनको क्लिनिकमा सम्पर्क गरेकी थिइन् । असाफले ती महिलाको नाम सार्र्वजनिक गरेका भने छैनन् तर ती महिला विवाह गर्नुपूर्व ६ महिनादेखि ती ३४ वर्षीयसँगको सम्बन्धमा रहेको भने जानकारी दिए ।
एसपी विष्टको बर्दीभित्रको कालो कर्तुतको भयो पर्दाफाँस, हत्यारा लुकाउन यस्तो सम्म करतूत -भिडियो हेर्नुहोस
“याद गर, तिमीहरुको सत्ताको दम्भ क्षणिक हो, आज तिम्रो हातमा भएको सत्ताको बुट र ब न्दुक भोलि अर्कैको हातमा हुनेछ: ज्वाला सङ्ग्रौला”